Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 27/09/2020)
Nokuti avo ukasazviziva kare, Black Forest imvura miti mudunhu kumaodzanyemba-kumadokero Germany. More zvakananga, zvakanyorwa iri rehurumende Baden-Württemberg uye anopindura chikamu chinokosha nayo.
The Black Forest, kana Schwarzwald sezvo zviri kunzi muna German, ane nzvimbo vakawanda yakanaka Panoramic maonero. It zvakare akazara dzinokatyamadza rwizi pamipata jeka, naka twi zvezvikomo zhinji kuti unogona kuwana pano.
Chii chimwe, uchawana yose naka uye fairytale-kufanana gore rose! Ndicho chokwadi nokuti anotarisa zvinoorora kana zviri jeka, naya-naya, uye kana pane chando. Unogona kuona kuti zvakajeka pamusoro mifananidzo yakawanda yacho.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/black-forest-by-train/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)